၁၃ဝဝ ပြည့် အရေးတော်ပုံ ကာလအတွင်း မန္တလေးအာဇာနည် ၁၇ ဦး ကျဆုံးခြင်းအနှစ်(၈ဝ)ပြည့် အထိမ်းအမှတ် ? - Yangon Media Group
၁၃ဝဝ ပြည့် အရေးတော်ပုံ ကာလအတွင်း မန္တလေးအာဇာနည် ၁၇ ဦး ကျဆုံးခြင်းအနှစ်(၈ဝ)ပြည့် အထိမ်းအမှတ် ?
၁၃ဝဝ ပြည့်အရေးတော်ပုံကာလအတွင်း မန္တလေးအာဇာနည် ၁၇ ဦးကျဆုံး ခြင်းအနှစ်(၈ဝ)ပြည့် အထိမ်းအ မှတ်အခမ်းအနားကို ဖေဖော်ဝါရီ ၂၆ ရက် နံနက်ပိုင်းက မန္တလေး တမ္ပဝတီရပ် သြူ<ွကယ်ကုန်းရှိ မန္တ လေးအာဇာနည် ၁၇ ဦး ဗိမာန်၌ ကျင်းပခဲ့ကြောင်း သိရသည်။မန္တလေး ၁၃ဝဝ ပြည့်အရေး တော်ပုံကာလဖြစ်သည့် ၁၉၃၉ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီ ၁၁ ရက် ချီ တက်ပွဲတွင် နယ်ချဲ့တို့အား အလံ မလှဲတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြသူများထဲမှ ရဟန်းခုနစ်ပါးနှင့် လူပုဂ္ဂိုလ် ၁ဝ ဦးတို့သည် မန္တလေးမြို့ ၂၆ လမ်း ၈ဝx ၈၁ လမ်းအရောက်တွင် နယ် ချဲ့လက်ပါးစေတို့၏ သေနတ်ဖြင့် ပစ်ခတ်မှုကြောင့်ကျဆုံးခဲ့ရသည်။
မန္တလေးမြို့လူထုမှ ကျဆုံး သွားသော အာဇာနည် ၁၇ ဦး တို့ကို ဂုဏ်ပြုသည့်အနေဖြင့် ”နေ မျိုးမဟာသီဟသူရ”ဘွဲ့အပ်နှင်းချီး မြှင့်၍ သြူ<ွကယ်ကုန်းတွင် မန္တလေး အာဇာနည် ၁၇ ဦး ဗိမာန်တော် ဆောက်လုပ်ထားရှိသည်။ ယနေ့ကျင်းပသည့် အနှစ် (၈ဝ)ပြည့် အထိမ်းအမှတ်ပွဲတွင် ကျင်းပရေးကော်မတီမှ ဦးစီး၍ ဆရာတော်ကြီး ၁၇ ပါးတို့အား နေ့ဆွမ်းဆက်ကပ်လှူဒါန်း၍ သင်္ကန်းအစရှိသော လှူဖွယ် ဝတ္ထု ပစ္စည်းများ ဆက်ကပ်လှူဒါန်းကြ ကာ ကျဆုံးခဲ့သော မန္တလေးအာ ဇာနည် ၁၇ ဦးတို့အား ရည်စူး၍ ရေစက်ချ အမျှပေးဝေကြသည်။
အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနား သို့ မန္တလေးမြို့နယ်များမှ အမျိုး သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီဝင် များ၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအမျိုး သမီးကော်မတီ၊ နိုင်ငံရေးအကျဉ်း သားဟောင်းများအသင်းအဖွဲ့များ၊ ပရဟိတအဖွဲ့များနှင့် အာဇာနည် ၁၇ ဦးမိသားစုအနက်မှ ဗိုလ်ဗ ဌေးမိသားစုတို့ တက်ရောက်ကြ ပြီး မန္တလေးအာဇာနည် ၁၇ ဦး တို့အား ရည်စူး၍ အလေးပြုလွမ်း သူ့ပန်းခွေနှင့် ပန်းခြင်းများ ချခဲ့ကြ ကြောင်း သိရသည်။
ပိတ်သိမ်း အုတ်ကျင်း ဂုန်နီအိတ်စက်ရုံ ဝန်ထမ်းများ လုပ်သားအခွင့်အရေးများ တောင်းဆို ဆန္ဒထုတ်
ပါမောက္ခ စတီဖင်ဟော့ကင်း ဈာပနသို့ လူအများအပြား လာရောက်ဂုဏ်ပြုနိုင်ဟု ခန့်မှန်း